Fiaraha-mientan’ny mpanohitra: hidongy tsy handray anjara amin’ny fifidianana ny Tim | NewsMada
Handeha ila ny fifidianana ? « Tsy handray anjara izahay. Tsy ara-dalàna ny firosoana amin’io fifidianana io. Aleo hitsara ny vahoaka na ara-dalàna na tsia izany fifidianana izany. Tena amboletra ny hanaovana izany », hoy ny filoha nasionalin’ny Tim, Ravalomanana Marc. Namory sy nanome toromarika ireo olom-boafidy ahitana ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsaina, ny depiote, ny loholona tetsy Bel Air ny tenany tamin’izany. Nanteriny fa miara-dalana amin’ny vondron’ny parlemantera sy ny mpanohira, nifamory teny Andrainarivo izy ireo. « Voafehy ary tsy hiatrika na handray anjara amin’izany fifidianana izany ireo olom-boafidinay ireo », hoy ihany izy.
Momba ny fanakatonana ny AAA kosa, nambarany fa tsy tompon’andraikitra amin’io orinasa io ny tenany. « Mazava ny voalazan’ny sori-dalana raha momba ny hetran’ny Tiko fa anjaran’ny fanjakana ny manonitra ireo orinasa niharam-boina tamin’ny krizy teto amin’ny firenena », hoy ihany izy.
Tsiahivina fa anisan’ireo nandray anjara tamin’ny fihaonamben’ireo antoko politika ivelan’ny fitondrana sy ireo parlemantera, ao anatin’ilay antsoina hoe “Groupe Panorama” ny avy amin’ny Tim. Mitovy ny tadin-dokanga ny amin’ny tsy fanekena ny hirosoana amin’ny fifidianana loholona.